Fikarohana momba ny firaisana Tantara momba ny fiainana taloha miaraka amin'ny drafitry ny fanahy, ny fanahy ary ny fiainana taloha Phobia: tranga fanakorontanana Tiorka an'i Nasir Alev | Nasir Toksoz - Fikarohana Reincarnation
Fomba fiaina: Fahatsiarovana avy amin'ny fahazazany
From: Ireo trangan-javatra momba ny karazana gay vaovao, Boky III, Ireo tranga roa ambin'ny folo ao Libanona sy Torkia, avy amin'i Ian Stevenson, MD
Ny fiainan'i Nasir Alev sy ny fahafatesany avy any Tetanosy
Nipetraka tao amin'ny tanànan'i Yukari Ekinci i Nasir Alev, izay 10 kilometatra na kilaometatra avy eo Antakya. Nasir dia fantatra ho tena mpivavaka sy mpivavaka. Miaraka amin'i Esma vadiny, nanana zanaka 5 izy, zanaka lahy antsoina hoe Salih, Hasan, Zahir ary Necim, ary zanakavavy iray atao hoe Elmas. Nasir dia mpamboly manana farihy oliva, izay kilaometatra vitsivitsy miala ny tanàna.
Raha tokony ho tamin'ny taona 70 izy, dia niankohoka teo anoloan'ny tranolainy izy. Teo ambanin'ny lavarangana ny dingana. Rehefa lavo izy dia nokapohin'i Nasir tamin'ny vato iray ny lohany, nanimba ny handriny sy ny orony. Ny ra nalaina dia nitsingevana teny amin'ny orony.
Taorian'ny andro vitsivitsy, niharatsy ny toe-pahasalamany ary tsy afaka niteny izy. Nasir dia nentina tany amin'ny Hopitalin'ny Governemanta tao Antakya, izay nahitana fa tsy afaka nanokatra ny valanoranony izy, izay nahatonga azy tsy afaka nihinana. Maty tamin'ny 21 tamin'ny 1960 izy tamin'ny 10 tamin'ny 30 tamin'ny maraina. Ny tanjon'ny fahafatesana dia tapa-kevitra ny ho tetanosy.
Drafitra fanahy sy fanahy: nofy manambara
Mehmet Toksoz koa dia mpamboly nipetraka tao an-tanànan'i Yukari Ekinci. Tamin'ny alin'ny volana 20, 1960, nanonofy izy izay nanatona an'i Nasir Alev. I Mehmet dia nahafantatra an'i Nasir ho olom-pantatra, raha teo akaikin'ny alokaloky oliva izay mipetraka kelikely vitsy miala ny tanàna. Ny tranon'izy ireo tao Yukari Ekinci dia manodidina ny metatra 300. Na dia nifankahalala aza izy ireo dia tsy mpinamana akaiky.
Tao amin'ny nofy dia niteny tamin'i Mehmet i Mehir, "Tonga hiaraka aminao aho." (1)
Nofehezin'i Mehmet ny nofy dia midika hoe nasaina ho lasa zanany indray i Nasir. Medina, vadiny, dia efa bevohoka sivy volana tamin'izany fotoana izany. Tao anatin 'ny nofy dia nianiana i Mehmet fa hanome anarana ilay anarana efa fantany, Nasir.
Tamin'ny fotoana nananan'i Mehmet io nofinofy io, mbola velona i Nasir Alev tao amin'ny hopitaly governemanta tao Antakya. Ho faty izy ny marainan'ny volana Aogositra 21, 1960 ao amin'ny 10: 30. Tsy fantatr'i Mehmet fa marary na maty i Nasir.
Fahatsiarovana an-davanandro: Nahatsiaro i Little Nasir Toksoz fa maty tamin'ny alahelon'ny lohany sy ny fiainany taloha tany Belzika
Ny marainan'ny volana Aogositra 21, 1960, ny ampitso taorian'ny nanombohan'i Mehmet ny nofiny, zazalahy teraka tany Mehmet sy Medina. Araka ny nampanantenainy, i Mehmet dia niantso ny zazalahy Nasir.
Raha i Nasir Toksoz dia teo anelanelan'ny roa ka hatramin'ny telo taona, dia niala tao an-tranony ny reniny nankany amin'ny loharano kely mba haka rano. Rehefa niverina izy, dia nitazona an'i Nasir nipetraka tao an-jaridainy izy. Nijoro mangina izy, tamin'ny fomba izay tsy hitan'i Nasir azy, ka dia afaka nihaino izay nolazainy izy.
Imbetsaka i Nasir no nilaza hoe: "Nankany Belzika ny zanako lahy." (2)
Nankany Nasir àry i Medina ary nanontany azy hoe: "Nahoana ianao no miteny toy izany? Manana zanaka ve ianao? "(3)
Nilaza i Nasir fa nanao izany izy ary nantsoiny ireo zanakalahy efatra sy vavy tokana izay tsaroany nandritra ny androm-piainany taloha.
Nanome fanazavana tamin'ny antsipiriany momba ny fiainany taloha tamin'ny ray aman-dreniny i Nasir. Nolazainy fa tamin'io fanombohana teo aloha io, ny anarany dia Nasir koa ary nomena anarana hoe Esma ny vadiny. Nilaza i Nasir fa ny anaran-janany dia Salih, Hasan, Zahir ary Necim, ary nanana zanakavavy atao hoe Elmas izy. Nilaza i Nasir fa tany Belzika i Hasan zanany. Ireo fanambarana rehetra ireo dia marina ho an'ny fianakavian'i Nasir Alev.
Nitatitra i Nasir fa maty taorian'ny nianjerany izy ary namely ny lohany tamin'ny vato, izay marina. Nilaza ihany koa izy fa lavo tamin'ny lavarangana izy, na dia efa nanandrana nampita izany aza izy fa nianjera teo ambany balcony, izay mety ho fanambarana marina.
Taoriana kelin'izay dia kely i Nasir no afaka nanasongadina ny dingana tao amin'ny tranon'ny Alev izay nahatsiarovany nianjera sy namely ny lohany. Ny famantarany ireo dingana ireo dia marina.
Nilaza i Nasir fa taorian'ny nahafatesany sy talohan'ny niverenany indray, dia niseho teo anatrehan'Andriamanitra izy ary nitantara ny fiainany sy ny fitondran-tenany tamin'Andriamanitra.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha sy ny fitadidiana ny fiainam-piainana taloha: Nasir Toksoz nihaona tamin'ny zanany vavy taloha & avy amin'ny ala oliva, nitondra azy tany amin'ny fiainany taloha
Raha efa teo anelanelan'ny telo ka hatramin'ny efatra taona i Nasir, dia nentin'ny reniny nahita ny vadiny Mehmet, izay niasa kilometatra vitsivitsy niala tao amin'ny saham-boankazo oliva. Ny saham-boankazo oliva akaiky dia ny fianakaviana Aliv. Indray mandeha, dia nanaiky an-tsitrapo an'i Elmas Alev, zanakavavin'i Nasir Alev, i Nasir.
Nihazakazaka nankany amin'i Elmas i Little Nasir ary niteny hoe: "Ianao no zanako vavy." (4)
Elmas dia nanontany an'i Nasir hoe: "Iza ianao?" (5)
Namaly i Nasir hoe: "Izaho no rainao." (6)
Nolazain'i Elmas avy eo fa raha i Nasir no rainy, tokony ho afaka hahita ny tranony any an-tanàna izy. Nanao izany i Nasir, nitarika an'i Elmas niverina tany amin'ny tanàna teny an-dalana, ary nitodika ka nandeha an-tongotra kely, niafina mivantana tany amin'ny trano Aliv. Teny an-dalana ho any an-tranon'i Alev, i Nasir kely dia nahafantatra ny olona sy ny toerana mifandray amin'i Nasir Alev.
Indray mandeha tao amin'ny trano Alev, Nasir dia niteny hoe: "Ity trano ity ity." (7)
Tany akaikin'ny trano Alev, Esma, vadin'i Nasir Alev, dia nijoro tamin'ny vondron'olona hafa. Raha tsy misy fanampiana amin'ny fanekena ny fankatoavana dia niakatra tany amin'i Esma kely i Nasir ary nilaza hoe:
"Ianao no vadiko." (8)
Niditra tao an-trano i Nasir ary nanipika ny toerana nodiaviny, araka ny nosoratan'i Nasir Alev, izay fantatra marina.
Ian Stevenson dia namerina ny làlana mankany an-tranon'ny Alev ary nanamarika fa tsy hita eny an-dàlana ny trano ary ny fahaizan'i Nasir mahita azy amin'ny alàlan'ny làlana kely dia fanehoana mahatalanjona.
Mampahatsiahy ny tranga izany Anne Frank | Barbro Karlen, raha folo taona i Barbro, dia afaka nitondra ny ray aman-dreniny tany amin'ny hotely any Amsterdam mivantana tany amin'ny Anne Frank House, na dia mbola tsy tany avaratr'i Amsterdam mihitsy aza i Barbro. Ny Anne Frank | Ny tranga Barbro Karlen dia tena zava-dehibe satria maneho izany tarehy ary Ny talenta dia afaka mitoetra ho tsy miova hatramin'ny iray aina mankany amin'ny iray hafa Afaka miova ny fivavahana sy ny zom-pirenena avy amin'ny fampidirana iray mankany amin'ny iray hafa.
Fahatsiarovana ny fiainany taloha: Nahatsiaro ny fiainany taloha i Nazar, Zahir
Tsy teo i Zahir zanak'i Nassir Alev, fony i Nasir nahita ny tranony Alev. Taty aoriana, rehefa nijanona tao amin'ny arabe i Nasir sy i Medina reniny, dia nahamarika an'i Zahir i Medina. Nanondro an'i Zahir izy ary nanontany an'i Nasir hoe: "Fantatrao ve ny zanakao?" (9)
Namir namaly hoe, "Misy ny zanako Zahir." (10)
Fihetseham-piainana taloha: Nasir mitsidika ny fiainany taloha
Raha vao nahita ny fianakavian'i Alev i Nasir, dia nitsidika matetika izy. Ny fianakaviany taloha dia nanome fanomezana azy, nampiseho ny fitiavany an'i Nasir sy ny porofo hitany fa izy dia ny vatana vaovao indray vao teraka.
Voamarika fa matetika i Nasir dia nandositra lavitra ny tranon'ny Toksoz mba handehanana any amin'ny trano Alivany tsy hiteny na iza na iza. Nilaza ny rainy fa indraindray dia hijanona mandritra ny andro maro izy amin'ny fiainany taloha. Nanohy nitsidika ny trano Alev i Nasir mandra-pahatongany farafahakeliny 12 taona.
ao amin'ny Rashid Khaddege | Daniel Jurdi Rahalahy, tamin'ny fahatanorany, dia nitsidika ny fiainam-pianakaviany taloha indray i Daniel indray mandeha isam-bolana, izay nikarakaran'izy ireo ny doka ho azy mba hahafahany mijanona miaraka amin'izy ireo. Ny fametahana ny mpikambana amin'ny fiainan'ny olona iray taloha dia matetika hita ao amin'ny tranga indray ao amin'ny vatana. Ny Rashid Kaddege | Ny raharaha Daniel Jurdi dia manan-danja ihany koa asehon'izany Ny endriky ny endrika dia afaka mitoetra ho tsy miovaova avy amin'ny fampidirana iray mankany amin'ny iray hafa.
Fiafaran'ny fiainana an-taonany
Medina Toksoz, renin'i Nasir, dia nanamarika fa natahotra ny toerana avo i Nasir, izay toa mifandraika amin'ny hoe maty noho ny fahalavoana tamin'ny fotoana nahatongavany teo aloha.
Drafitra fanahy sy fandraisana anjara amin'ny fanahy: Avy amin'ny tontolon'ny fanahy, ny fanahin'i Nasir dia nandefa nofy tamin'i Mahmet izay manondro fa hiverina any amin'ny fianakavian'i Mahmet izy.
Fahatsiarovana ny fiainana tany am-piandohana: Ny kely amin'i Nasir dia afaka nitarika an'i Elmas, ny zanany vavy taloha, avy amin'ny alim-bary natolotr'i Nasir Alev ho any an-tranon'i Nasir Toksoz, izay kilometatra maromaro. Ian Stevenson dia nanamarika fa ny trano Alev dia tsy hita any amin'ny làlambe mainty ary ny fandraisana anjara mivezivezy eny amin'ny lalan-kely madinika. Stevenson dia nahita ny fahaizan'i Nasir hahita ny fiainany taloha.
Ny tranga akaiky sy ny fifandraisana taloha dia navaozina tamin'ny alàlan'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao: Niverina tamin'ny fomba tsotra i Nasir Alev tamin'ny tokantrano Toksoz, izay niaina ny 300 metatra avy tao amin'ny trano Alev, izay nahafahan'i Nasir Toksoz nahita ny fiainany taloha. Noho izany, ity dia tranga iray momba ny vatana vaovao momba ny fanambadiana, izay iverenan'ny fanahy iray eo akaikin'ny fiainam-pianakaviana taloha hamela ny fihaonana.
Fiainana taloha Phobia: Ny renin'i Nasir dia nanamarika fa natahotra ny toerana avo i Nasir, izay mety ho nihemotra tamin'ny fianjerany izay namarana ny fiainan'i Nasir Alev.
Fiverenana ny fisandratana na fiverenana mivantana: Nasir Toksoz dia teraka tamin'ny marainan'ny nahafatesan'i Nasir Alev. Amin'izany, raha heverina fa ny fanahy dia tafiditra amin'ny fampiroboroboana ny foetus, dia nanentana ny fozon'i Nasir Toksoz nandritra ny sivy volana nateraky ny fitondrana ny fanahin'i Nasir Alev, raha mbola velona kosa i Nasir Alev.
Mariho fa ny sary atolotry ny pejy voalohany dia tsy avy amin'i Nasir Alev, fa ny olona hafa mijaly amin'ny tetanosy.
1.Stevenson, Ian: Fahaiza-mifehy ny vatana teraka: Boky III, Roambinifolo roambinifolo ao Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 324
2. Stevenson, Ian: Ireo tranga tany am-boalohany: Boky III, Roambinifolo Roambinifolo tany Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 325
3. Stevenson, Ian: Ireo tranga tany am-boalohany: Boky III, Roambinifolo Roambinifolo tany Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 325
4. Stevenson, Ian: Ireo tranga tany am-boalohany: Boky III, Roambinifolo Roambinifolo tany Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 330
5. Stevenson, Ian: Ireo tranga tany am-boalohany: Boky III, Roambinifolo Roambinifolo tany Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 330
6. Stevenson, Ian: Ireo tranga tany am-boalohany: Boky III, Roambinifolo Roambinifolo tany Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 330
7. Stevenson, Ian: Ireo tranga tany am-boalohany: Boky III, Roambinifolo Roambinifolo tany Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 330
8. Stevenson, Ian: Ireo tranga tany am-boalohany: Boky III, Roambinifolo Roambinifolo tany Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 331
9. Stevenson, Ian: Ireo tranga tany am-boalohany: Boky III, Roambinifolo Roambinifolo tany Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 331
10. Stevenson, Ian: Ireo tranga tany am-boalohany: Boky III, Roambinifolo Roambinifolo tany Libanona sy Torkia, University of Virginia Press, 1980, pejy 332